ခရီးဆောင်းပါးများ / Travel Articles – Oway Trip
Category: ခရီးဆောင်းပါးများ / Travel Articles
ပြည်ပခရီးတစ်ခုထွက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးတာကတော့ passport ပါ။။ Passport လို့ပြောရင် ၄င်းတို့ အမျိုးအစားတွေအကြောင်းကလည်း အတော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ Passport ဟာ နိုင်ငံစုံသွားနိုင်တယ်၊ Visa Free နဲ့ နေထိုင်နိုင်တယ်၊ သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့နိုင်ငံမှာ Long Stay ခေါ်တဲ့ အချိန်အကြာကြီးနေထိုင်ခွင့် စတာတွေရရှိခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင် ယင်းPassport ဟာ အတော်ကို အသုံးဝင်တဲ့ passport အမျိုးအစားထဲထည့်သွင်းလို့ရပြီ။ အသုံးအ၀င်ဆုံး passport ဆိုမှတော့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်ထူးတွေပါပဲ။ 2015 ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းသတ်မှတ်ချက်အရတော့ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်၊ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန် နဲ့ ဗြိတိသျှ passport တွေဟာ အင်းအာကြီး စာရင်းဝင်တွေပါပဲ။ ဆွီဒင်ပတ်စ်ပို့စ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ်ယောက်က နိုင်ငံပေါင်း (၁၇၄) နိုင်ငံကို visa free သွားရောက်နေချိန်မှာ မြန်မာပတ်စ်ပို့စ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေက အမေရိကန်…
နိုင်ငံခြားတွေ သွားလည်တော့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်တော်များများအတွက် ဗီဇာလိုအပ်ပါတယ်။ ဗီဇာမလိုတဲ့ နိုင်ငံအရေအတွက်များလေလေ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုရဲ့ အင်အားတန်ဖိုးကလည်းကြီးလေလေပါပဲ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ဗီဇာလျှောက်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားကို လွယ်လင့်တကူ သွားရောက်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့၎င်းတို့ သွားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံအရေအတွက်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ၁။ ဂျာမနီ (၁၇၆ နိုင်ငံ) ၂။ ဆွီဒင် (၁၇၅ နိင်ငံ) ၃။ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ အီတလီ၊ စပိန် နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ (၁၇၄ နိင်ငံ) ၄။ သြစတြီယား၊ ဘယ်ဂျီယံ၊ ပြင်သစ်၊ လူဇင်ဘတ်၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေး၊ စင်္ကာပူ နဲ့ယူကေ (၁၇၃ နိုင်ငံ) ၅။ အိုင်ယာလန်၊ ဂျပန် နဲ့ …
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်ကြီး အထင်ကရ အဆောက်အဦးတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အတွင်းရော အပြင်ပါ ခမ်းခမ်းနားနား ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မွန်းမံထားတဲ့အဆောက်အဦးတွေပေါ့။ ဈေးအကြီးဆုံးစာရင်းမှာတော့ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးတွေသာမဟုတ်ပဲ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တွေ၊ လူနေတိုက်ခန်းအဆောက်အဦးတွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ကဲ….. ဘယ်အဆောက်အဦးတွေက ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး အဆောက်အဦး ၁၀ ခုဆိုတာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁၀။ မင်းသမီးမျှော်စင် တည်နေရာ – ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး ကုန်ကျစရိတ် – US$2.17 Billion UAE နိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့ မင်းသမီးမျှော်စင် ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်ဆုံးလူနေတိုက်ခန်းအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၄၁၄ မီတာရှိပြီး Burj Khalifa ရဲ့ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ မင်းသမီးမျှော်စင် ဟာ ဒူဘိုင်း ရဲ့ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကတော့…
စိတ်အားထက်သန်တဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ တွေးတောကြံစည်ထားသမျှကို ရအောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း စိတ်အားထက်သန်အောင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ။ အထူးသဖြင့် ခရီးထွက်ဖို့ ဆိုရင် ဘယ်အရာတွေက စိတ်အားထက်သန်စေမှာလဲ ??? နေရာအသစ်တွေအကြောင်းလေ့လာပါ။ သင်သွားချင်တဲ့ နေရာအကြောင်းကို အမြဲတမ်းဖတ်ရှုနေပါ။ Online ကနေ နေရာအသစ်တွေအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသတင်းတွေကနေ တစ်ဆင့်နေရာအသစ်တွေအကြောင်းကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံလေ့လာခြင်းဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေ အများအပြားရှိပါလားဆိုတာကို တွေ့ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ နေရာစုံအကြောင်း ပိုပြီးလေ့လာလေလေ၊ ဘယ်နေရာသွားမလဲဆို ပိုစဉ်းစားနိုင်လာလေလေပါပဲ။ အချိန်ပေးပါ။ နေ့ စဉ်အလုပ်တွေကတော့ အမြဲတမ်းများနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုပါတော့ မေလမှာ ထိုင်းသွားလည်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးတာကို အခုမေလကုန်သွားမှ ပြန်သတိရလာတာမျိုးကြုံဖူးမှာပါ။ အားတဲ့အချိန်လေးကို လုယူပြီး ခရီးစဉ်အတွက် အစီအစဉ် အကြမ်းဖျင်းပဲဖြစ်ဖြစ် စီစဉ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ခရီးသွားဘလော့ (Travel Blog) တွေဖတ်ပါ။ အခြားခရီးသွားတွေရဲ့…
ခရီးသွားခြင်းဟာ လူတိုင်းကို ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်လာစေပါတယ်။ ခရီးစဉ်တစ်ခု ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ခရီးစဉ်မစတင်တုန်းကထက် တစ်နည်းတစ်ဖုံပိုပြီးတိုးတက်စေပါတယ်။ ပိုပြီးရင့်ကျက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေသလို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ လူတစ်ဦးလည်းဖြစ်လာစေပါတယ်။ ခရီးထွက်ခြင်းကြောင့် အတွေ့ အကြုံများလာတဲ့ အတွက် သင်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လူတစ်ဦးလည်းဖြစ်လာမှာပါ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တိုးတက်လာစေတယ်၊ ဘာကြောင့်တိုးတက်လာစေတယ်ဆိုတာကို အောက်ပါအချက်အလက်လေးနဲ့ ပြုစုကြည့်ရအောင်။ ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာတိုးတက်လာခြင်း – နေရာဒေသအသစ်၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးအောင်လုပ်မယ်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုကတော့ အမြဲတမ်းတစ်ယောက်ထဲနေမယ်။ ငိုရတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တောင်ဖတ်ထားစရာ ခေါင်းအုံးလေးတစ်လုံးပဲရှိတဲ့အခြေအနေပေါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင်ဟာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အသစ်တွေလုပ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း မသိတဲ့ သူစိမ်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ရာမှာ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ စကားပြောဆိုရာမှာ တိုးတက်လာခြင်း – နေရာဒေသအသစ်တစ်ခုမှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ် အများအပြားတွေ့လာမယ်။ စကားတွေလည်းအများကြီးပြောရတော့မယ်။…
ခရီးသွားပရိတ်သတ်တွေ ကိုထုံးစံအတိုင်း ထူးခြားပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ မြို့တစ်မြို့ကိုခေါ်သွားချင်ပါတယ်။ ဘယ်မြို့ ပါလဲ ? ကြီးမားခန့်ညားတဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့ကြီးပါပဲ . ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့ကြီးဟာ အဆောက်အအုံ အသစ် ၊ နည်းပညာနယ်ပယ်မှ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ အလျှိုလျှို ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နေတဲ့ မော်ဒန်မြိ့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် . သဘာဝဆန်ဆန်နဲ့ ပျော်စရာတွေ ပြည့်နှပ်နေသော ဆန်ဖရန်စစ္စကို မြို့ကို ကျွန်တောတို့ စာဖက်ပရိတ်သတ်တွေ သောကြာနေ့မှာ ရောက်သွားခဲ့မယ် ဆိုရင် …. မျက်တောင်မခတ်လိ်ိုက်ပါနဲ့ မဟုတ်ရင် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ရဲ့ အလှသစ်တွေကို သင်လွတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သောကြာနေ့(၄ နာရီ) City By The Bay မြို့တော်ကို ရောက်ရောက်ချင်း ညနေခင်းရဲ့ အလှတရားကို စတင်ခံစားဖို့ သင်ကအထိုက်တန်ဆုံး လူသားတစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ…
နွေဦးရာသီမှာ ခရီးသွားပရိတ်တွေအတွက် ယူရုတ်မြေကိုခြေဆန့်ဖို့ စိတ်ကူးတွေဖန်တီးပေးချင်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါ အော်စရီးယား နိုင်ငံ အဇိုက်ဘို့(ဇ်) မြို့တော်အကြောင်း နဲ့ အဇိုက်ဘို့(ဇ်) ကိုဘာကြောင့် လည်ပတ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ အဇိုက်ဘို့(ဇ်) ရဲ့ နောက်ခံကျောရိုးဟာ ဂန္တဝင်ဆန်ဆန် ဂီတအငွေ့အသက်တွေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့် ကြွှားစွာတည်ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒီနောက်ခံကျောရိုးကို အခြေတည်ခဲ့သူကတော့ ကမ္ဘာကျော်ဂန္တဝင်ဂီတပညာရှင် ဘော့ဂန် အမားဒီးယက်(စ်) မိုးဇက်ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဇိုက်ဘို့(ဇ်) မြို့ဟာဂီတပညာရှင် မိုးဇက်ရဲ့ မွေရပ်မြေဖြစ်လို့ပါပဲ ။ အရင်ဆုံး အဇိုက်ဘို့(ဇ်) မြို့တော် အကြောင်းကစလိုက်ချင်ပါတယ်အဇိုက်ဘို့(ဇ်) မြို့တော်ဟာ အော်စရီးယား နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ (၄)မြို့မှာပါဝင်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်တောင်တန်းတွေရယ် ၊ ကဗျာဆန်ဆန် ဥယျာဉ်ပန်းခြံတွေက ခရီးသွားချစ်သူတွေကို ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်ပြတိုက်တွေလဲ ဒီမြို့လေးမှာ ရှိပါသေးတယ်။ တစ်ကယ်လို့ သင်သာဂီတကို…
ဘက်စုံကျော်ကြားသော နယူးဇီလန်ရဲ့ မြို့တော် ဒနိတ်ဒင်း
မြို့တော်တွေရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားမှုတွေက ၄င်းမြို့ရဲ့ အမွအနှစ်သမိုင်းကြောင်းတွေအပေါ်မှာ အတိအကျသက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ငြင်းစရာမရှိသလို ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံးမြို့တွေဟာ သမိုင်းကြောင်းထင်ရှားပြီး သူမတူတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ထူးခြား သော Otago ကျွန်းဆွယ် ပေါ်တွင် တည်ရှိတဲ့ ဒနိတ်ဒင်း မြို့အကြောင်းကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒနိတ်ဒင်း မြို့ဟာ နယူးဇီလန် ရဲ့ အသက်အကြီးဆုံး မြို့ စာပေသမိုင်းကြောင်း ကောင်းတွေ ၊ သမိုင်းပေး ယဉ်ကျေးမှု စည်းစိမ် အမွေအနှစ်တွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တာကြောင့်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒနိတ်ဒင်း မြို့မှာ အမွေအနှစ် အဖြစ် Scottish တက္ကသိုလ်တစ်ခု ရှိပြီး ၊ ရှားပါး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် သိုက် ၊ အားကစာ သမိုင်းကိုလေ့လာနိုင်သော ခန်းမ အစရှိသော ထူးခြားမှုများ စွာ…
ဒီတစ်ခါ ခရီးသွားပရိတ်သတ်တွေကို ပဲရစ်မြို့ကို လည်ပတ်ဖို့ အဲကြံပြုချင်ပါတယ် ။ ပဲရစ်မြို့ကို ခေတ်ဆန်ဆန်ပြန်လည်သုံးသပ်ရရင် လက်ရှိအခြေအနေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်များနဲ့ကွဲပြားခြားနားလို့နေခဲ့ပါတယ် . အခုအခြေအနေနဲ့ ရှုခင်းအလှတရားတွေက ပဲရစ်မြို့ရဲ့ အသက်ဝိညာဉ် ကိုထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ပါတယ် . ကြီးကျယ်ခန်းနားသော လေယာဉ်ကွင်း ၊ ကွေ့ကောက်စီတန်းနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ ရှေးခေတ်ဆန်ဆန် ကော်ဖီဆိုင်တွေ ၊ ထုံးကျောက် အဆောက်အဦးများနှင့် ဒေသခံတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ရင်မှုနဲ့ နှစ်သက်စရာကောင်းပြီး ခေတ်ဆန်ဆန် ပြတိုက်တွေ၊ ဂန္ထဝင်ဆန်ဆန် လျှောက်လမ်းတွေ တည်ရှိနေတာက ယနေ့ ပဲရစ်မြို့ကြီးပါပဲ ။ ၃၆ နာရီ အတွင်းမှာ ပဲရစ်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတွေ ၊ မသွားမဖြစ်နေရာ (၁၁) နေရွာကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိ လည်ပတ်ရမယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ် ။…
ဟောင်ကောင်မှာ (၃၆) နာရီ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေး အလျှင်အမြန်တိုးတက်နေသော နိုင်ငံတစ်ခုကို အနုပညာဆန်ဆန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်တွေ့နိုင်မယ့် နိုင်ငံတစ်ခုဆီကို ဒီလမှာတော့ ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ ခရီးသွားပရိတ်သတ်ကြီးကို ခေါ်သွားချင်ပါတယ်။ Hong Kong ရဲ့ မြို့ပြတိုးတက်မှုဟာ ရပ်တန့်ဖို့ မလွယ်ကူလောက်အောင် လျင်လျင်မြန်မြန် တိုးတက်နေပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ နှစ်အစပိုင်းမှာဘဲ မြို့သစ်ဒေသများကို စီမံကိန်းနယ်မြေများအဖြစ် ယနေ့အထိ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေခြင်းဟာ Hong Kong မြို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို အထင်းသား တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ထူးဆန်းသစ်ထားသော မြို့ပြစီမံကိန်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ဒီဇိုင်းဖန်တီးရှင်များ စုဝေးရာ အနုပညာ ပြတိုက်ခန်းမများအပါအဝင် အနာဂတ်ရဲ့ စီးပွားရေး၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများကို Hong Kong မြို့ပေါ်မှာ လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Hong Kong မြို့ကို လာရောက်လည်ပတ်သူ ခရီးသွားဧည့်သည်များမှ ရရှိသော…